Ungakugwema kanjani ukushintsha kwesimo sezulu: amathiphu amahle | Green Renewables
Ungakugwema kanjani ukushintsha kwesimo sezulu
IsiJalimane Portillo | | Imvelo
Ukushintsha kwesimo sezulu kuyinkinga enkulu ebhekene nabantu kuleli khulu leminyaka. Isimo sezulu sethu siyashintsha futhi nakho konke okuguquguqukayo kwesimo sezulu kanye namaphethini omkhathi. Izimbangela eziyinhloko zalokhu kuguquka kwesimo sezulu ikakhulukazi kungenxa yabantu. Imisebenzi yezomnotho yabantu iya ngokuya iwonakala futhi icekela phansi imvelo yemvelo. Ngamunye njengomuntu angathatha izinyathelo ezahlukene ukuvimbela lokhu kwanda. Abantu abaningi bayazibuza indlela yokugwema ukushintsha kwesimo sezulu.
Ngakho-ke, sixoxa ngeziqondiso ezingcono kakhulu zokufunda ukugwema ukushintsha kwesimo sezulu.
1 Izenzo zokufunda ukugwema ukushintsha kwesimo sezulu
1.1 Yehlisa ukukhishwa kwekhabhoni
1.2 Yonga amandla
1.3 Lawula izinto zikagesi
1.4 Shintshanisa ama-LED ama-bulb
1.5 Ungakugwema kanjani ukushintsha kwesimo sezulu ngokugaywa kabusha
1.6 Ukupakisha okuncane
1.7 Thuthukisa ukudla
1.9 Sebenzisa amanzi ashisayo amancane kanye nokusekela okuvuselelekayo
Izenzo zokufunda ukugwema ukushintsha kwesimo sezulu
Yehlisa ukukhishwa kwekhabhoni
Uma ufuna ukubamba iqhaza ngenkuthalo ekulweni nokushintsha kwesimo sezulu, sebenzisa imoto yakho ngokulinganisela. Sebenzisa izinto zokuhamba ezisimeme ngangokunokwenzeka, njengamabhayisikili noma usebenzise izithuthi zomphakathi ezengeziwe. Mayelana namabanga amade, into esimeme kunazo zonke izitimela, futhi ngaphezu kwezindiza, ibhekene nengxenye enkulu yokukhishwa kwe-carbon dioxide emkhathini. Uma kufanele usebenzise imoto, Khumbula ukuthi ikhilomitha ngalinye olisheshisayo lenyusa i-CO2 futhi kubiza kakhulu. Ilitha ngalinye likaphethiloli elisetshenziswa imoto limelela cishe amakhilogremu angu-2,5 esikhutha esikhishelwa emkhathini.
Ngeminye imihlahlandlela emincane ekhaya singafunda ukugwema ukushintsha kwesimo sezulu ngokonga amandla. Ake sibone ukuthi ithini leyo mihlahlandlela:
Ungashiyi i-TV yakho nekhompyutha kumodi yokulinda. Ithelevishini ivula amahora amathathu ngosuku (ngokwesilinganiso abantu baseYurophu babuka ithelevishini) futhi ihlezi ilindile amahora angu-21 asele, idla u-40% wawo wonke amandla kwimodi yokulinda.
Ungayishiyi ishaja yakho yeselula ixhunywe kugesi ngaso sonke isikhathi, noma ingaxhumekile ocingweni, ngoba izoqhubeka nokusebenzisa amandla.
Hlala ulungisa i-thermostat, kungaba ukushisa noma air conditioning.
Lawula izinto zikagesi
Ubuwazi yini ukuthi ngokusebenzisa izinto zikagesi ezisendlini yakho ngokuqaphela nangokuqikelela ungaba neqhaza ekulweni nokuguquguquka kwesimo sezulu? Sikunikeza amathiphu:
Mboza ipani ngenkathi ukupheka kuyindlela enhle yokonga amandla. Okungcono nakakhulu ama-pressure cookers nama-steamer, angonga amandla angu-70%.
Sebenzisa umshini wokuwasha kanye nomshini wokuwasha kuphela lapho sezisuthi. Uma kungenjalo, sebenzisa uhlelo olufushane. Akudingekile ukusetha izinga lokushisa eliphezulu, njengoba ama-detergents amanje asebenza kahle ngisho namazinga okushisa aphansi.
Khumbula lokho iziqandisi neziqandisi kuzodla amandla engeziwe uma ziseduze nomlilo noma i-boiler. Uma sezindala, zincibilikise ngezikhathi ezithile. Entsha inomjikelezo wokuncibilika ozenzakalelayo osebenza kahle ngokuphindwe kabili. Ungafaki ukudla okushisayo noma okufudumele esiqandisini: uzokonga amandla uma ukuyeke kuphole kuqala.
Shintshanisa ama-LED ama-bulb
Ukushintsha amalambu okukhanya endabuko ngamalambu okukhanyisa onga amandla yonga ngaphezu kwamakhilogremu angu-45 e-carbon dioxide ngonyaka. Eqinisweni, okwesibili kuyabiza kakhulu, kodwa ishibhile empilweni yakho. Ngokusho kwe-European Commission, omunye wabo anganciphisa isikweletu sikagesi ngama-euro angama-60.
Ungakugwema kanjani ukushintsha kwesimo sezulu ngokugaywa kabusha
Inhloso ye-3R ukwenza kube lula ukulwa nokushintsha kwesimo sezulu ngezenzo ezintathu:
Idla kancane futhi isebenza kahle.
Sebenzisa imakethe yamasekeni ukunikeza elinye ithuba lezinto ongasazisebenzisi noma ukuthola izinto abanye abangazidingi. Uzokonga imali futhi uzokwazi ukunciphisa ukusetshenziswa. Zijwayeze futhi ukuxhumana.
Ukupakisha kabusha, imfucuza kagesi, njll. Ubuwazi ukuthi ungonga ngaphezu kuka-730 kg we-carbon dioxide ngonyaka ngokugaya kabusha ingxenye yemfucumfucu ekhiqizwa ekhaya lakho?
Khetha imikhiqizo enamaphakheji amancane: ibhodlela elingu-1,5 litre likhiqiza imfucuza encane kunebhodlela elingu-3 litre.
Uma uyothenga, sebenzisa izikhwama ezisebenziseka kabusha.
Gwema ukusebenzisa izinto zokusula ezimanzi kanye nephepha eliningi. Uma unciphisa imfucuza ngo-10%, ungagwema ukukhishwa kwe-1.100 kg ye-carbon dioxide.
Ukudla okune-carb ephansi kusho ukudla okuhlakaniphile nokubhekana nokushintsha kwesimo sezulu.
Yehlisa ukusetshenziswa kwenyama - Imfuyo ingenye yezinto ezinkulu ezingcolisa umoya - futhi yandise ukusetshenziswa kwezithelo, imifino nemifino.
Thenga imikhiqizo yasendaweni neyesizini: Funda amalebula futhi udle imikhiqizo yendabuko eseduze ukuze ugweme ukungenisa ezweni okungenzeka kukhiqizwe izinto zokuthutha ezengeziwe.
Futhi sebenzisa imikhiqizo yesizini ukugwema ezinye izindlela zokukhiqiza ezingasimeme kakhulu.
Zama ukusebenzisa imikhiqizo eminingi ye-organic ngoba zimbalwa izibulala-zinambuzane namanye amakhemikhali asetshenziswayo ekukhiqizeni.
Ekulweni nokushintsha kwesimo sezulu, ukuvikelwa kwamaqembu amahlathi kufanele kufunwe:
Gwema imikhuba engase ibe yingozi yomlilo, njengokugcoba ezindaweni zemvelo.
Uma kufanele uthenge izinkuni, bheja ngesitifiketi noma uphawu lwemvelaphi esimeme.
Tshala isihlahla. Isihlahla ngasinye singamunca ithani le-carbon dioxide, ngakho uzosiza ukulwa nokushintsha kwesimo sezulu.
Sebenzisa amanzi ashisayo amancane kanye nokusekela okuvuselelekayo
Inani elikhulu lamandla liyadingeka ukushisa amanzi. Lezi ezinye izenzo ezimelene nokushintsha kwesimo sezulu ezizokongela imali:
Faka isilawuli sokugeleza kwamanzi eshaweni futhi uzogwema ukukhishwa kwe-carbon dioxide engaphezu kuka-100 ngonyaka.
Geza ngamanzi abandayo noma afudumele futhi uzokonga amakhilogremu angu-150 we-CO2.
Wonga amanzi ashisayo futhi usebenzisa amandla aphindwe kane uma ugeza esikhundleni sokugeza.
Vala umpompi ngenkathi uxubha amazinyo akho.
Qiniseka ukuthi ompompi bakho abavuzi. I-drip ingalahlekelwa amanzi anele ukugcwalisa ubhavu ngenyanga.
Okokugcina, esinye isinyathelo ongayenza ukulwa nokushintsha kwesimo sezulu ukukhetha amandla aluhlaza futhi ukhuthaze ukukhiqizwa kwamandla avuselelekayo afana nelanga, umoya, amanzi, njll.
Ngethemba ukuthi ngalawa macebiso ungafunda kabanzi mayelana nendlela yokugwema ukushintsha kwesimo sezulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Imvelo » Ungakugwema kanjani ukushintsha kwesimo sezulu